TORO LALAN’NY BAIBOLY: “Mitafia fitiavana fa fatorana mampiray tonga lafatra izy io.”—Kolosianina 3:14.
MAHASOA VE IZANY? Tsy fitiavana eo amin’ny lehilahy sy vehivavy no tena resahin’ny Baiboly, fa fitiavana hafa mihitsy. Ny olona maneho an’io fitiavana io dia mangoraka, mamela heloka, manetry tena, tsy mivadika, tsara fanahy, malemy fanahy, ary manam-paharetana. Ny toro lalana avy amin’Andriamanitra no mahatonga ny olona hanao izany. (Mika 6:8; Kolosianina 3:12, 13) Afaka mitombo foana ny tena fitiavana, fa tsy mora lefy hoatran’ny fihetseham-po tsapan’ny olona taitaitra fotsiny.
I Brenda, ohatra, tena manaiky an’izany. Efa ho 30 taona nanambadiana izy izao. Hoy izy: “Marina aloha fa mifankatia be ny mpivady vao. Vao mainka anefa mihamafy ny fifankatiavany arakaraka ny fandehan’ny fotoana.”
I Sam koa manamafy an’izany. Efa 12 taona mahery izy izao no nanambady. Hoy izy: “Tsapanay mivady hoe mandaitra foana ny torohevitry ny Baiboly, nefa tsy hoe sarotra be ny mampihatra azy. Gaga mihitsy izahay roa satria vao mampihatra an’ilay torohevitra izahay, dia milamina ny adinay. Satriko aloha hiteny hoe nampihatra foana aho, kanefa tsy maintsy miaiky aho hoe tsy vitako ilay izy indraindray. Mety hoe reraka loatra aho, na tia tena kely, na koa kizitina. Mivavaka amin’i Jehovah aho rehefa hoatr’izany, mba ho tony ny foko sy ny saiko. Fihiniko mafy be ny vadiko avy eo, dia milamina hoatran’ny tsy nisy teo ilay olana!”
‘Ny fahendren’ny olona dia hamarinin’izay ataony’
‘Ny fahendren’ny olona dia hamarinin’izay ataony’, hoy i Jesosy Kristy. (Matio 11:19) Voaporofo àry hoe feno fahendrena ny torohevitry ny Baiboly. Mahasoa foana mantsy izay voalaza ao, sady tsy mety lany andro. Mandaitra amin’ny olona rehetra izy io, na inona na inona fiaviany. Hita mihitsy hoe avy amin’i Jehovah, Mpamorona antsika, ireny torohevitra ireny, ary tena natao ho an’ny olona satria izy no mahalala tsara ny olombelona. Rehefa ampiharina anefa izy ireny vao tena hita hoe mandaitra. Manasa antsika àry ny Baiboly hoe: “Andramo ka jereo fa tsara i Jehovah.” (Salamo 34:8) Hanaiky an’izany ve ianao?
NANATSARA NY FIAINAKO NY BAIBOLY
Vehivavy mipetraka any Azia Atsimoatsinanana i Linh. Niova izy rehefa nampihatra ny toro lalan’ny Baiboly, ka lasa tsara kokoa ny fiainany. Nanontany azy momba izany ny Mifohaza!
Inona no fivavahanao taloha?
Bodista ny fianakaviako, ary nafana fo be izahay nanaraka ny fombafomban’io fivavahana io. Tsy nahalala an’ilay Andriamanitra marina mihitsy aho.
Faly ve ianao tamin’izany?
Tsy izany mihitsy! Be dia be aza ny olana nahazo ahy. Tsy nahay nitantam-bola mihitsy aho, sady tsy nana-namana tsara. Nanana olana koa ny ray aman-dreniko nefa tsy haiko ny nanampy azy ireo.
Nisy tovovavy vitsivitsy nampianatra Baiboly ahy. Vavolombelon’i Jehovah ry zareo. Manontany azy ireo aho isaky ny misy olana. Mbola zandriko izy ireo nefa tsara be ny torohevitra nomeny. Tsy ny heviny manokana anefa no nolazainy fa nampiasa Baiboly foana izy ireo. Hitako izao hoe tena mahasoa ny mampihatra ny torohevitry ny Baiboly. Resy lahatra àry aho fa boky avy amin’Andriamanitra izy io, ary izay miezaka mampihatra azy io dia handray soa foana. Marina fa ilaina ihany ny hoe mahita fianarana, kanefa tsy tena mahasoa hoatran’ny Baiboly izany.
Azonao hazavaina ve izany?
Nahita fianarana be ny ray aman-dreniko, ka mba nanana ny maha izy azy. Tsy nahita vahaolana anefa izy ireo rehefa nisy olana ny tokantranony. Nisaraka àry izy ireo, ary samy tsy sambatra. Nianatra teny amin’ny oniversite koa aho, ary nampianarina hoe ilaina indraindray ny herisetra mba handaminana olana. Ny Baiboly anefa milaza fa na miezaka toy inona aza ny olona, dia tsy tena hahita vahaolana. Sady tsy mahay ny olona, no tsy tokony hitondra samirery ny fiainany. Efa izay mihitsy no nanaovan’Andriamanitra antsika. Izany no mahatonga ny fitondran’olombelona tsy hahomby mihitsy, sady lasa manao zavatra ratsy foana. * Raha mankatò an’Andriamanitra anefa isika, dia hihatsara ny fiainantsika, ary ho modely ho an’ny hafa isika.
Inona avy ny soa noraisinao?
Be dia be. Tsy miady saina be intsony aho izao, sady lasa manana namana tsara betsaka. Efa mahay mitantam-bola koa aho, ka mba afaka mitsidika toeran-kafa indraindray. Ny zava-dehibe indrindra dia hoe afaka manampy an’ireo sahirana aho.
^ feh. 20 Jereo ny Mpitoriteny 8:9; Jeremia 10:23.
Hizara Hizara Manehoa Fitiavana